Awoodaha Sare ee Dhibcaha Lead | Martech Zone
Awoodaha Sare ee Dhibcaha Lead
Talaado, September 3, 2013 Khamiista, Oktoobar 31, 2013 Jenn Lisak Golding
Waxaan ku haysanay xogtan shaqadan muddo ah, runtiina aad ayaan ugu faraxsanahay sawirka iyo waxa ku jira. Waad ku mahadsantahay wada shaqeynta kooxdeena at Highbridge, our suuqgeynta qalab otomaatiga ah kafaala-qaadeyaasha Xaqa Is-Dhexgalka (ROI), iyo hibada cajiibka ah ee Ryan Howe at Riwaayad Henchmen, waan ku faraxsanahay inaan shaaca ka qaadno Awoodaha Sare ee Dhibcaha Lead.
Dhibcaha hogaanka ma ahan dhacdo cusub, laakiin ROI wuxuu leeyahay aragti ka duwan marka laga hadlayo dhibcaha hogaanka. Aragtidooda, 3D score waa waxa ugu weyn ee ku xiga, taas oo ah kordhinta waxa gooldhalinta iyo kobcinta ay hadda tahay. Tani waa waxa ay u egtahay:
Dhibcaha Xogta + Dhibcaha Hawlgelinta + Marxaladda Nolosha = Dhibcaha 3D
Infographic-kaani wuxuu quusinayaa mid kasta oo ka mid ah wejiyada dhibcaha 3D iyo sida ay u bixin doonto aragti cad oo ku saabsan waxa ay 3D dhibco runtii tahay. Sidee ayaad dhibcaha u siineysaa macaamiishaada iyo rajooyinkaaga hadda? Muxuu kaga duwan yahay tusaalahan?
Haddii aad raadineyso macluumaad dheeri ah, ka fiiri fiidiyowgooda ugu dambeeyay otomaatiga suuq geynta iyo kobcinta hogaanka. Oo waxaad ku raaxeysataa awoodaha ugu sarreeya ee gooldhalinta hogaanka!
Tags: suuq geynta nolosha macaamiishadhibcaha hogaankaSuuq geynta noloshamarxaladaha noloshasuuq-geynta suuqagoolasha dhalintasaxda ah is-dhexgalka
Sep 3, 2013 at 5: 21 PM
Haa! Jeclow sawir-gacmeedkan! Shaqo wacan